Buy Condo Rent (ID-663) (27Lks) in ကျောက်တံတား on ipivi.com
Near Ruby Mart, 2100 sqft condo area for rent in Kyauktada Township. Office type.
Monthly Rent Price - 2000 USD (Nego)
ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ Ruby Mart အနီးရှိ ငှားရန်ရှိသော ၂၁၀၀ စတုရန်းပေအကျယ်ရှိသည့် ကွန်ဒိုဖြစ်ပါသည်။ ရုံးခန်းအဖြစ် အသုံးပြုရန်သင့်တော်ပါသည်။
ကွန်ဒိုအိမ်ခန်း၏ လစဉ်ငှားရမ်းခမှာ - ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပါသည်။
ငှားရန် ကွန်ဒို (ID-663)
အမည်: Condo Rent (ID-663)